Dowladda Soomaaliya oo sargaal hore oo katirsanaa ONLF u gacan gelisay Itoobiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo sargaal hore oo katirsanaa ONLF u gacan gelisay Itoobiya
Dowladda Soomaaliya oo sargaal hore oo katirsanaa ONLF u gacan gelisay Itoobiya
August 31, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Cabdikariim Shiikh Muuse oo loo yaqaan Qalbi Dhagax. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa sargaal hore oo katirsanaa ONLF ku wareejisay Itoobiya, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha NISA Cabdullaahi Maxamed Sanbalooshe.
Asbuucii lasoo dhaafay, ciidamada NISA ayaa Cabdikariim Shiikh Muuse oo loo yaqaan Qalbi Dhagax ku qabtay gudaha magaalada Gaalkacyo waxayna u wareejiyeen magaalada Muqdisho kahor intaan gacanta loo gelin Itoobiya.
Bayaan ay soo saareen, Jabhadda Xoraynta Ogaadeen (ONLF) ayaa xaqiijisay in hoggaamiyahooda hore loo wareejiyay Itoobiya.
August 22, 2018 Puntland oo sheegtay in ay aad uga xun tahay arday ay ciidamada Somaliland ku dileen magaalada Laascaanood
August 20, 2018 Madaxweynaha Puntland oo kala diray golaha deegaanka Badhan
August 21, 2018 Kenya oo baaraysa baasaboorka Fahad Yaasiin
August 19, 2018 Abaanduulihii ciidamada milatariga ee xilka laga qaaday oo beeniyay in uu goostay
Shir ay hoggaaminayso Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka dhici doona gudaha magaalada Garoowe
Somali government handed over former ONLF commander to Ethiopia
Madaxweyne Cabdiweli oo maanta oo Khamiis ah u safraya Gaalkacyo
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa la filayaa maanta oo Khamiis ah inuu u safro magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen saraakiil dowlada ah. “Maanta Madaxweynaha wuxuu safar ugu baxayaa Gaalkacyo si [...]
Mareykanka oo duqayn ka dhan ah Al-Shabaab ka geystay gobolka Banaadir
Garowe-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa qaaday duqayn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay bayaan ku sheegtay waaxda Difaaca Mareykanka. Howlgalka ayaa ka dhacay gudaha gobolka Banaadir ee koonfurta Soomaaliya, sida ay sheegeen Mareykanku. Bayaanka dhexdiisa, [...]